Tattoos zaseHawaii - Tattoos zamaHawaii zoBantu baseThawai
Tattoos Tribal Tribal for Men
Tattoos Iingcamango zobugcisa Ngamana 13, 2017
1. Iingcamango ezinobunzima beTawaii zoobuhlanga beGayda ngasemva
2. I-tattoo yohlanga lwesizwe saseHawaii ekhohlakeleyo emva kweBafana
3. Iimpawu ezixakekileyo ezimnyama zaseHawaii ezibuyiselwa kumathambo
4. Oluthandwayo oluncinci lwamabala aseHawaii ngcamango ebusweni kubafana
5. Ubomi obomvu obunobumba obomvu baseHawaii kunye neengalo zengalo zengqondo zeMadoda
6. Ukubhenela umnyama omnyama nombala obomvu weTawaii emibonweni yamadoda ehlombe
7. I-Tattoo yamabala ebomvu ebomvu yaseHawaii egxeni likaGuy
8. AmaTokki asezulwini aseThawaiwa kunye neengcamango zomnxeba wembalo
9. I-tattoo ethandwayo ngokukhawuleza yohlobo lwamabala yaseHawaii idibanisa kwiNgalo yabantu
10. Iimpawu ezibomvu nezibomnyama zaseHawaii Iziqulatho zemibala ye-tattoo ye-Guys
11. Ukuthabatha umdlalo we-tattoo waseHawaii wenzelwe i-Tattoo kunye namadoda
12. Ukuthintela abantu abamnyama baseHawaii bezobugcisa beT tattoo
13. Iingqumbo zesizwe saseHawaii kunye neengcamango zeembononongo zomfana kunye namadoda
14. I-tattoo ye-Hawaiian tribe tattoo imibono kwi-chest for Men
15. I-Hawaiian Tribal Tattoo imibono ekhangelekileyo kwi-Afra
16. Imiba ebomnyama yaseHawaii eneembononongo zengqondo yabantwana
17. Ukugqithisa ingalo eqhelekileyo kunye neengxowankulu zamaTayda zoobugcisa beentlanga kubafana kunye namadoda
18. Ukuthakazelisa iAhawaiian I-tattoo yohlobo lwe-Tattoo yoBufana
19. Iimbono zeTayda zaseTawaii zengalo yeengalo zamaGrayi
20. Ubukhulu obuninzi obumnyama baseHawaiian Tribal back Tattoo idibanisa abantu
21. Ubuhle obuhle bubukeka bebukeka be-Turtle ephakathi kweHawaiian Tribal Tattoo kwi-Guys
22. Ukufumana isicatshulwa sobuciko se-Hawaiian Tribal shoulder Tattoo for Men
23. Eyona ntshatshazi ebomnyama yaseHawaii i-Tribal Tattoo idibanisa kwi-Guys
24. Ukuqulunqa i-tattoo ye-Hawaiian Tribal Tattoo kwi-chest nangengalo yabantu
Tatayian Tribal Tattoo
Ama tattoos aseHawaii ngenye yeendlela ezithandwayo zamehlo zanamhlanje. Ama tattoos aseHawaii abonisa inkcubeko eneenkcubeko kunye nelifa lemveli kwiiIlawi zaseIhawaii ngokusebenzisa iimpawu kunye neepatheni ezahlukahlukeneyo. Bobabini nabesetyhini banxiba le tattoos njengombutho kulezi zizwe ezinzulu. Ngokuqhelekileyo amadoda ayibhala ngomzimba wabo wonke entloko ukuya enzwaneni. Nangona abafazi bengenakufumana umzimba womzimba, babenandipha inxaxheba efanelekileyo yokubhala tattoo. Yonke imifanekiso yamathambo yayingumqondiso kwaye ibanjwe ngentsingiselo ejulile. Ngokuqhelekileyo ezi tatto zenziwe kuphela kumbala omnyama.
Inki yakudala yayidibanisa umlotha kunye ne-soot kwaye yafakwa ekutyeni okunzulu emzimbeni womntu kwaye yavunyelwa ukuba yome ukuze iingubo ziguqulwe. Kamva i inki yenziwe ngomxube weenkusi za kukuku kunye nejusi. AmaTattoos ahlala aquka ukudibanisa okungafaniyo kobugcisa bezizwe kunye nemifanekiso eqingqiweyo yezilwanyana zomoya, iintyatyambo zeTropical, okanye ii-Tiki Gods. Abantu baseHawaii babhekisela ubugcisa bokubhala imiyalezo njenge 'kakau' kunye nokubhala tattoo kwiintsuku ezindala kwakuphawuleka kobukroti babo njengoko bafumana inkqubo ebuhlungu kakhulu.
Izitayela zendabuko ezisetyenziselwa iipomethri zejometri kunye neendlela zokulinganisa umgca wokulinganisa kwiinki ezimnyama ukuphawula ukuzinikela kwenkolo, iinkonzo zenkqantosi, ubukroti kwimfazwe, isimo, iinqanaba kunye nelifa. Nangona kunjalo, ama tattoos amandulo aseHawaii enza umxube wemibala kwaye unesichukumiso esichukumisayo ngenxa yempembelelo yenkcubeko yasentshona. Ezi tattoos zendabuko zazingenwa ngeenjongo ezahlukeneyo ezifana nokuzifumanisa, ukukhusela, ukukhunjulwa kwabathandekayo, ukuhlobisa, ukomoya, ifa lemveli kunye noluntu njengemfazwe. Yonke into yoyilo iyingqayizivele kwaye isizathu sokuba umntu akhethe itekisi ethile yodwa.
Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa zee tattoos eziqhelekileyo ezisetyenziswayo, ezifana:
Gecko: Enye yezinto ezithandwa kakhulu nentandokazi kwi tattoo yaseHawaii yiGecko njengoko kukholelwa ukuba kunamandla angaphezu kwamandla. Ukuhlanganiswa kwamabala aseHawaii e-gecko kwenza ukuba kubonakale kwaye kuyakha.
Sharks: esi sidalwa esinamandla sibonwa njengingcwele ngabadala kunye nesimbolo sokukhusela umntu ogqayo.
Tiki: Uthi uTiki ukholelwa ukuba ngumntu wokuqala, ukhokho oyingqungquthela yabantu. UTiki uyakwazi ukuhogela ingozi ngenxa yokuvavanya kwayo.
Iikhonkco: Ngamaxesha amandulo, iigobols zisetyenzisiwe njengehlobo lwemali kwaye ngoko i-inked njengoko zifana nokuchuma kunye nobutyebi.
I-Turtle Sea: I-tortle yolwandle ibonakalisa ubomi obude kunye nokuzala.
Ientyatyambo zendalo: Ama-Orchids, i-humanrium kunye ne-hibiscus ziqhelekileyo zisetyenziswe kwii-tattoos zaseHawaii. I-Orchid ibonisa uthando, ubuhle, i-luxury, kunye nobuhle. I-humanrium yintyatyambo ebomvu ebonisa ukufuduka, ububele kunye nobuhlobo. I-Hibiscus, i-flower ye-flower yaseHawaii inqabileyo kakhulu inxulumene nehlobo kwaye lihle.
Olunye ukhetho oluqhelekileyo yi-Hula abadansi, iLeis kunye neentaba.
Iimpawu ze-tattoo zaseHawaii zikhulu kwaye zibanzi ngokuthelekiswa nezinye iifoto zePolynesia, okwenza ngokuqinisekileyo ubuciko. Fumana enye, ukuba uyayithanda ngokwenene i-Hawaiian designs. Khetha owokumela wena kakhulu kwaye uyayixabisa ubomi bakho bonke.
tags:tattoos hawaiian tattoos kubantu tattoos zohlanga
Tattoos Iingcamango zobugcisa
NdingumRitu kunye nelungu leqela le-https://tattoosartideas.com.
tattobathanda i tattoostattoo engapheliyodesign mehndiIintyatyambo zeTattootattoosiifotto zentamotatna tattooiifoto eziphakamileyotattoos kubantuiidotizengalo zengaloizigulanetatto flower floweri-cherry ityatyambongesandlatattoosizithunywa zezuluicompass tattootattoostattoos zohlangazinyonii tattooi-tattoosiimpawu zezodiac zempawuutywala tattootattoos zenyangangombonosibiniIintliziyo zeTattoostattoo yamehlotattoos zelangaTattoos zeJometritattooscute tattoosowona mhlobo womhlobotattooukutshiza amathamboiipattoosiifatyambo zeentyatyambotattoos kumantombazanazomculo tattoostattoos ezinyawotatto tattoosI-Ankle Tattoosizifuba zesifubaihoi fish tattooIndlovu yeendlovutattoo yedayimanitattoo